Biby dia amin'ny pensily miloko by Limpscomb | Famoronana an-tserasera
Sary an'olona bibidia vita amin'ny pensily miloko nataon'i Lipscomb
Pensilihazo miloko, ampiasaina am-pahendrena, afaka manome asa na asa tena manaitra raha manana fahalalana ampy momba ny teôria loko. Miaraka amin'ny firoboroboana rehetra amin'ny sary hosodoko nomerika dia toa lasa any ambadika any izay matetika ny pensilihazo sy saribao no irina amin'ny fandalinana ny endrik'olombelona ary hiditra amin'ny tontolon'ny sary rehefa mandalo sekoly mianatra.
Angamba ny sanganasan'i Katy Lipscomb dia mety ho iray amin'ireo ohatra, amin'ny maha-mpampianatra azy, dia azon'ny olona ampiasaina hanolorana izany ho an'ny mpianatra sy hanehoany ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny loko tsirairay izay mamorona ny faribolana chromatic. Limpscomb dia Mpanao sary tsy miankina mipetraka any Alpharetta, Georgia fa ny tanjony dia ny fananana olona tsara sy fizarana ny kantony amin'izao tontolo izao.
Ny iray amin'ireo andianteny izay nanampy azy indrindra tamin'ny lalam-kantony dia ny zavatra nolazain'ny mpampianatra azy rehefa nilaza izany taminy izy rehefa miantso tena ho mpanakanto, dia rehefa tena mpanakanto izy. Manodidina izany dia mety hieritreritra isika fa tsy dia nanisy fiheverana loatra ny torohevitra na ny tsikera raisiny ho valin-teny, saingy tsy toy izany, noheveriny fa na dia elanelany lavitra foana aza izy ireo.
Izy tenany ihany no milaza ny fomba amin'ity asa sy fiainana ity tsy azo atao ny mampifaly ny olona rehetra, ka zavatra toa izany no mitranga amin'ny zavakantony ary noho izany dia raisiny am-pitaka be izany mba tsy handray tsy fahombiazana tsy ampoizina alohan'ny fitsikerana sy hevitra sasany.
Ny asa ataonao amin'ity andiana biby dia miaraka amin'ny pensilihazo miloko Tena avo lenta io ary fampisehoana teknika hitondra loko mazava an'io amboadia, serfa na elefanta io. Mpanakanto hanaraka azy Facebook, Instagram o Devianart.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary an'olona bibidia vita amin'ny pensily miloko nataon'i Lipscomb
Fanangonana ny tontolon'ny sary nomerika voaforon'ny rindrambaiko